people Nepal » रिस : हृदयाघात, पक्षाघात र उच्च रक्तचाप -डा. भारत रावत रिस : हृदयाघात, पक्षाघात र उच्च रक्तचाप -डा. भारत रावत – people Nepal
काठमाडौं । रिस भनेको मानिसमा सामान्य रुपमा
हुने उद्वेग हो । यदि यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले अरुलाई होइन, आफैँलार्ई हानी पुर्याउन सक्छ । रिसाइहाल्नुअघि एकछिन सोच्ने बानी गर्नुपर्छ । यसो गरेको खण्डमा सामाजिक रुपमा पनि राम्रो हुन्छ । रिसले अन्य कुरामा हानी त पुर्याउँछ नै, स्वास्थ्यलाई पनि त्यत्तिकै असर गर्छ । रिसले उद्धेलित हुने वा एकदम झडङ्ग रिसाउने जस्तो जुनसुकै व्यवहार पनि हाम्रो हृदयरोग र रक्तसञ्चार प्रणालीका निम्ति खतरानाक हुन्छन् भन्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन । यी अनुसन्धानहरुले रिसको हृदयघात र पक्षाघातसँग परस्पर सम्बन्ध रहेको जानकारी दिएका छन् ।
आफूलाई एकदमै रिस उठेको बेला सम्झनुहोस् त ! रिसाएको बेला तपाईको मुटुको चाल एकदम छिटो हुन्छ, मुख रातो हुन्छ । तपाईको मुटुको चाल बढ्नाले र दाह्रा किट्ने गर्नाले रक्तचाप बढ्छ ।
झडङ्ग रिसाउनु या रिसलाई लुकाउन खोज्नुभन्दा यसलाई विस्तारै शान्त भएर प्रकट गर्नु अत्यन्त स्वस्थकर हुन्छ । ससाना कुरामा पनि झडङ्ग रिसाउने या सधैं जस्तो रिसाइरहने व्यक्तिलाई मुटुको रोग लाग्ने वा हृदयाघात हुने खतरा बढी हुन्छ । रिस र स्वास्थ्यको सोझो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । सन् २००४ मा गरिएको एक अध्यनमा रिस तथा कुण्ठाले मुटुको चाल असामान्य तुल्याउँछ र आकस्मिक मृत्यु निम्त्याउन सक्छ भन्ने पाइएको छ । कमजोर मुटुलाई स्वचालनमा ल्याउने उपकरण शरीरभित्र प्रत्यारोपण गर्दा वैज्ञानिकहरुले शारीरिक तनावले भन्दा मानसिक तनावले व्यक्तिमा मुटुको गति असामान्य तवरले छिटो हुन जान्छ भनी पत्ता लगाएका छन् । मुटुको गति असामान्य गराउने एकमात्र कारण मानसिक तनाव हो ।
रिससँगसँगै आउने शारीरिक परिवर्तन मुटुको गति छिटो हुनु र रक्तचाप बढ्नु हो । यो परिवर्तन क्षणिक हो तर लामो वा लगातार रिसाइरहने भयो भने यस रक्तचापलाई उच्च बनाउन योगदान गर्छ । साधारणतः कम झगडालु व्यक्तिमा भन्दा बढी झगडालुमा रिसको तीब्रता हुने कुरा अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । साथै यस्ता झगडालु मानिसमा रिस पनि लामो समयसम्म रहिरहन्छ । झगडा गर्न उद्यत मानिसमा बढी र लामो समयसम्म रक्तचाप बढ्छ ।
रिस र पक्षाघातका बारेमा गरिएको अनुसन्धानले प्रकट नगरिएका रिस, विद्धेष तथा लामो समयदेखिको रिसभन्दा सोझो एवं शान्त तरिकाले व्यक्त वा प्रकट गरिएको रिस बढी स्वस्थकर हुन्छ भनेको छ । ससाना नकारात्मक व्यवहारले पनि हाम्रो मस्तिष्क तथा मुटुमा असर पार्छन् भनी अन्य अध्यययनले ध्यानकर्षण गरेका छन् । उदाहरणका लागि एक अध्ययनले धेरै बिरामीहरुमा अध्ययन गर्दा धैर्य नभएका, करकरे तथा अरुलाई जित्न खोज्ने व्यक्तिलाई मुटु रोग र पक्षाघातको बढी जोखिम भएको पाइएको छ । “रिसलाई त्यागौ शान्त होऊँ र जीवनको मज्जा लुटौं अनि स्वस्थ र दीर्घायु बनौं । ”